Chautari Daily » मलेसिया पठाउने भन्दै ठगीधन्दा
मलेसिया पठाउने भन्दै ठगीधन्दा
काठमाडौँ / वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया पठाउने भन्दै कामदारसँग अ,वैध रकम लिँदै गरेको अवस्थामा एक व्यक्तिलाई प”क्राउ गरेको छ । प,क्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिकाका कैलाश लिम्बू छन् ।
लिम्बूले मलेसिया पठाइदिने भन्दै सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–११ का झलकबहादुर विक र कोष्टराज विकसँग रु एक लाख २० हजार लिएका थिए । लिम्बूले शुक्रबार उनीहरुलाई ‘शनिबार उडान छ, पैसा लिएर आउनु’ भनेर बोलाएपछि झलकबहादुर र कोष्टराज मलेसिया जाने साइत गरेर काठमाडौँ आएका थिए ।
शनिबार उडान भनेर आए पनि आफूहरुको श्रम स्वीकृति नभएको र चर्को रकमसमेत मागेको भन्दै उनीहरुले विभागमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा विभागले तीनकुनेमा रहेको नोभा इन्टरनेशनलको कार्यालयबाट लिम्बूलाई पक्राउ गरेको हो ।
विभागको टोली अनुगमनमा पुग्दा लिम्बूले निजहरुसँग पैसा लिएर सोहि म्यानपावरका कर्मचारी गोकुल न्यौपानेलाई बुझाइसकेका थिए । विभागले न्यौपानेसँग रहेको रु एक लाख २० हजार नगदसमेत बरामद गरेको छ । यसअघि पनि लिम्बूले उनीहरुसँग प्रतिव्यक्ति रु ४०÷४० हजार लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
पीडितले आइएमईमार्फत लिम्बूलाई रकम पठाएको प्रमाण विभागलाई बुझाएका छन् । लिम्बूमाथि कारवाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागका महानिर्देशक डा भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि अझै पनि म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिसँग एजेन्टमार्फत नै रकम उठाउने गरेका छन् । (रासस)
प्रकाशित मिति ९ मंसिर २०७६, सोमबार ०३:१३
यी देशले माग्यो नेपाली कामदार, खर्च ५० हजार, तलब दुई लाख,
फेरि आयो बिष्णु माझिको यस्तो मार्मिक गीत / भिडियो हेर्नुहोस।
ह्वात्तै घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य, केजीको कति ? हेर्नुहोस्
सिद्धार्थ शुक्लाको निधनपछि प्रेमिकाको अवस्था यस्तो …
सेतीमा यसरी खसेकी रहिछन् ५ दिनअघि बिवाह गरेकी पवित्रा [भिडियो हेर्नुहोस्]
एयरपोर्टबाट उड्न ठिक्क परेका २ जना पक्राउ ; लगेजमा रहेछ यस्तो सामान
टिकटक बनाउँदा सेती नदीमा यसरी खसेकी थिइन् पवित्रा ( भिडियो हेर्नुहोस् )
आईफोन १३ सार्वजनिक, यस्ता छन् फिचर, कतिपर्छ मूल्य? हेर्नुहोस्
टिकटक बनाउने क्रममा सेतीमा ख’सेर नवविवाहित पवित्रा बे’पत्ता …(भिडियो हेर्नुहोस् )